नेपाली काङ्ग्रेस Archives - Lokpati.com
Tag - नेपाली काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, यी विषयमा हुँदैछ छलफल
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार
काठमाडौं, १२ भदौ। नेपाली काङ्ग्रेसले समसामयिक राजनीति, भ्रातृ, शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिका बारेमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। बिहीबार दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा सो...
समृद्धि कांग्रेसले मात्र ल्याउन सक्छ : प्रकाशमान सिंह
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले विकास बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको वर्तमान सरकारले लगानी सम्मेलनमा ठूलठूला कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। विदेशी लगानी नेपालमा भित्राउने कुरा सकारात्मक भए...
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला डिस्चार्ज
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्।
गत शुक्रबार अकस्मात बिरामी भएर धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालको आइसीयुमा रहेर उपचार गराएका सिटौलाको स्वास्थ्यमा सुधार...
‘गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिनुस्’ : गगन थापा
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं, ८ चैत । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले जिम्मेवार नेताहरुलाई गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले...
सरकारले हिलो र धुलोमात्र दियो : प्रकाशमान सिंह
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले खानेपानी नभएको काठमाडौंमा कहाँबाट पानीजहाज आउँछ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
आज कांग्रेस गण्डकी गाउँपालिकास्तरीय प्रशिक्षणमा शनिबार सिंहले सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल...
सामाजिक सञ्जालमा कडाइ मान्य हुँदैन : डा. महत
काठमाडौं, १३ फागुन । नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुनै पनि बहानामा आम नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन नहुने बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘साइबर कानून र यसले मिडियामा पार्ने...
महेश बस्नेत भन्छन् : ‘भ्रष्टाचारमा कांग्रेसले स्वर्णपदक जित्यो’
काठमाडौँ, १० फागुन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले कांग्रेसले आफ्ना नेतालाई भ्रष्टाचारमा स्वर्ण पदक दिलाएको बताएका छन् । उनले कांग्रेसले नियुक्त गरेकाहरु भ्रष्टाचारमा...
कांग्रेसमा फाइल बढुवा र वंशका आधारमा नेता हुन्छन् : आचार्य
काठमाडौं, ८ फागुन । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले आगामी चार वर्षसम्म पनि सरकारको गतिविधि यस्तै रहिरहे जनताको आशा र भरोसा समाप्त हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै...
काङ्ग्रेसको शक्ति प्रदर्शन : कुन नेताले कहाँ–के बोले ?
२१ माघ २०७५, सोमबार
काठमाडौं, २१ माघ । वामपन्थी सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र विरोध सभा गरेको छ । विरोध सभामा बोल्दै वक्ताहरुले सरकारले लोकतान्त्रिक पद्दति अंगाल्न नसकेको आरोप...
१० हजार खाने समातिए, अर्बौं खाने कहाँ छन् : रामचन्द्र पौडेल
दमौली, २१ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार समृद्धिको बाटोमा हिड्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको विरोध सभामा वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारका मन्त्रीहरु...
अवहेलना मुद्दामा बोकेर सर्वोच्च पुगे प्रचण्ड
कांग्रेस चुनावपछि मात्र सरकारमा जान्छ : गगन थापा
लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालत जाँदै प्रचण्ड
केपी ओली टुप्पीदेखि पैतलासम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् : प्रचण्ड
‘बी’ डिभिजन लिग : आज दुई खेल हुँदै
८ करोड इकाईकाे ‘कुमारी इक्विटी फन्ड’ आजदेखि बिक्री खुल्ला
तीन कम्पनीकाे शेयर मूल्य समायोजन
सुनवलमा चौथो मेयर कप फुटवल प्रतियोगिता सुरु